Ndakaipinza yese ndokutanga kumuisa patable mukitchen imomo! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndakaipinza yese ndokutanga kumuisa patable mukitchen imomo!
Ndakaipinza yese ndokutanga kumuisa patable mukitchen imomo!
Ndakasvika kumba makuseni kubva kwandakanga ndayenda kunosvirana naPauline kumba kwake waiting for madam kuti vauye kubva kuKwekwe. Ndakasvika ndikasiya mota pagate pamba paiita kunge pasina vanhu saka ndakasvikopinda mubedroom mangu ndokubva ndarara pabed asi kwete zvehope.
Pasina kanguva ndakanzwa voice rechikadzi ainge aripafoni apo hameno kuti aitaura nani apo achiti mudhara namama vepano vakayenda kupurazi marimwe zuro, imba ndeyangu apa ndirikutofamba ndisina kana kupfeka, haa mboro yangu yakabva yatanga kumira ndokubva ndati ndirikuda kumurova nesurprise.
Ndakavhura door slowly kuti ndokudongorera wanei aaahhh musikana ainge asina kana chinhu zveshuwa apa ainge akafongora beche rakazvimba matinji achirembera kuita kunge akaramwirwa.
Ndakashama kushaya kuziya kuti ndoita sei ndokubva ndati hesi Memo, mwana akaita kunge achanyura pafloor nekunyara ndichibva ndati usatye hako. Ndakafamba ndichiyenda kwaari ndikati ndanzwa nyaya yako pafoni I hope hazvina basa kana ndikaita so, apa ndaitobata mazamu nebeche ndichidzwa kuti ainge atotota kare , I am sure ainge achiri kuwona pono nekuti hazvina kana kutora nguva mwana ainge apfugama atondivhura zip ndokutanga kuyamwa mboro yangu zvemhando yepamusoro.
Nechemumoyo ndikati ari serious here mwana uyu? Ndakamusimudza ndokubva ndamugarisa patable mukitchen imomo, apa mboro yangu yainge yatomira zvehasha. Ndakaibayira ndinzwe beche rake rainge riri so tight zvekuti ndakafunga kuti ndirikusvira kavirgin. Akati ahhh , uummmm maihwe kani, akatanga kushinyira apa mboro ichinyura chete.
Ndakapinza mboro yese ndokutanga kukoira zvishoma shoma asi nekudziya kwaiyita beche iroro ndakabva ndatonzwa huronyo huchiwuya, ndakatanga kufunga kuti nhasi ndamakisa apa ndichisvira kamwana kadiki asi iko kakabva kangoti maihwe kani ndinzwe matinji ake achiita kudhonza mboro yangu ko ndaigoita sei ipapo ndiye tsaaa tsssaaaa tsaaaa.
Previous articleNdakainyudza yekedero ndokubva ayibata akanangisa paburi rechinhu chake!
Next articleAkandishadaburisa makumbo ndokunangisa zinhu rake ndokuriti shwee